ဘာပွောရမှနျး တောငျ မသိတော့ဘူး…..ရေးလဲရေးတတျတဲ့…လူတှေ ကှကိုယျသာဖတျကွညျ့တော့ – Shwe Naung
တက ယျတော့ …
ဗတျြဝိ ဗတ်ြတ က ဘာ “ဗတျြ” မြိုးနှယျစု မှ မဟုတျဘူး … မဲမဲသဲသဲ နဲ့ ကလှတျတား ကပ်ပလီ မြိုးနှယျတှပေေါ့ …။သငေ်ျဘာပကျြပွီး သထုံမှာ သောငျလာတငျနတော …။ ပွီးတော့ …ညီအ ကို လညျး မဟု တျလောကျဘူး …။ကပ်ပလီ တှေ ဆိုတော့ မဲမဲသဲသဲ ထောငျေ ထာငျမောငျးမောငျး နဲ့ ဘယျသူ့ကွညျ့ကွညျ့ မနျးကီးရုပျတှလေေ…။
ဒါကို ညီအကို လို့ ထငျတဲ့ အပျေါမှာ ဟိုနှဈကော ငျကလညျး ရော ကွိတျတာ ဖွဈဖို့မြားတယျ …။ ဗတျြဝိ ဗတ်ြတ ညီနောငျဂလယျအူကွောငျ နဲ့ သထုံမွို့ထဲ လြောကျလှိမျ့ေ နတော့ မနူဟာမငျး ကသိ သှားတယျ …။ ဒါနဲ့ နနျးတှငျးထဲ အလုပျချေါခနျ့ရငျ ကောငျးမလားပေါ့… နိုငျငံခွားသား အမဲတုံးကို အလုပျချေါခိုငျး ပစား ပေးထားရငျ ICJ လညျး လှတျ ၊ သူလညျး ဂုဏျတကျတာ ပေါ့ …။ ဒါပမေယျ့ ခကျနတောက … ဒီနှဈကောငျ က IS က လူလား ၊ အငျဂနျ က လူလား မကှဲဘူးရယျ …။
နောကျတော့ မထူးပါဘူးကှာ …မကောငျး ကြောငျးပို့ ဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး သူ့ရဲ့ မငျးဆရာတျော ဘားမဲ့ဆရာတျော ဆီ ပို့လိုကျပါလေ ရော …ဒါနဲ့ … ဗတျြညီနောငျ ခမြာ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ ဝယြောဝစ်ဆ လုပျပေါ့ ဆရာတျော ကလညျး ပှဲကြောငျးဆရာတျော ဆိုတော့ … လောကီပညာတှေ သငျပေးဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ ဆှမျးဟငျး ကလညျး အလြံပယျ ကနျြတော့ နငျးဖွဲစားလိုကျကွနဲ့ ဇိမျကနြကွေရော …။
ဒီလိုနဲ့ အခြိနျကွာလာတော့ ဗတျြညီနောငျဟာ သိုငျးပညာကလညျး တတျလူအကောငျကလညျး ထှား လာမငျးဆရာတျောရဲ့ တပညျ့တှေ ဆိုပွီး ကလှတျတား ဇ ဂြိုကွှ ပါလရေော …။တဈရကျသား ဆရာတျော အပွငျထှကျတုနျးကကျြသရခေနျး ထဲ က ကွကျသား ကို ဆေးခွောကျ နဲ့ ဗူးသီးရော ပွီး နှဈယောကျသား ခိုးခကျြစားကွတယျ …။
ခကျြနတေုနျး ဘုနျးဘုနျး က မိသှားတော့ သူတို့ ခကျြထားတာ ကို ဦးဦးဖြားဖြား ကပျလိုကျရတယျ … အဲဒီမှာ စားကောငျးကောငျး ဘုနျးပေးလိုကျတာကွကျသား ဟငျးလေး (၅) တုံး ပဲ ကနျြတော့တယျ …။အဲမှာ ဟို နှဈကောငျ အဝမေတညျ့ဖွဈပွီး ထသတျကွပါလရေော ။အကောငျက လညျး ကွီး သိုငျးပညာကလညျး တတျတော့ ဝုနျးဒိုငျးကွဲပေါ့ …ဆရာတေျာ့ ကြောငျးက နှဈတှကွောလို့ ဆှေးနတော … ဒီနှဈကောငျ အား နဲ့ ဝုနျးဒိုငျးကွဲတော့ ပွိုပါလရေော …။
အဲမှာ ဘုနျးဘုနျး က ဝိ တှေ ကှဲပွီး ဇျောဂြီ ဖိုဝငျသားစားလို့ ကြောငျးကို ဇောကျထိုး လုပျတယျ ပေါကျကရ လြှောကျအျောရော …ဘုနျးဘုနျးပွောသမြှ လညျး ဘယျသူမှ မငွငျးရဲဘူးလေ … မငျးဆရာဖွဈတဲ့ အပွငျ လကျသံ က ပွောငျတာကိုးးးး …။😅 အဲမှာ ရောငျတျောပွနျ နဲ့ နှဈကောငျသား နာမညျကွီးရောဖဲ …။
နောကျ …ဗတျြဝိ က လူကသာ မဲ တာ မွို့တျောဝနျ သမီး မအိုဇာ ကို တျောကီ နဲ့ ခြုပျလိုကျတာ ငွိ ကွရော …။အဲမှာ …ဗတျြဝိ က မအိုဇာ ဆီ ညတိုငျး သှားပွီး ဒနျ တနျ့ ဒနျ တယျ …။မွို့တျောဝနျ သိသှားတော့ “ဗတျြဝိ”ကို ဖမျးဖို့ကွံရတာပေါ့ … ရမျးလဲ မလုပျရဲဘူး … လူအမြားကွီး စု ရသေးတယျ … သိတယျမလား … ဟိုကောငျက တဇောကျကနျးကွီးရယျ …။
ဒါနဲ့ မအိုဇာဆီ ရောကျ နတေုနျး ….ဖမျးဟ ဆီးဟ နဲ့ ညာသံပေးပွီး ဝိုငျးကွရောဟို ငမဲ ကလညျး လနျ့ဖွနျ့ပွီး တောငျရှညျ လေးအမွနျဝတျထှကျပွေးတာ ….ဖွဈခငျြတော့ တောငျရှညျမဟုတျပဲမအိုဇာ ထမိနျ ဖွဈနရေော … အ့ နဲ့ ရှကျရှကျ နဲ့ ထမိနျ ခေါငျးစှပျပွီးနငျဂြာစတိုငျ မမွငျမစမျးလုပျနခြေိနျ မွို့တျောဝနျနဲ့ အဖှဲ့ကဖမျးမိလိုကျတာပါပဲ …။ဒါကို သမိုငျးဆရာတှေ က ကာယသိဒ်ဓိပွီးလို့ အခနျးတံခါးပျေါ မီးနသေညျ ထမိနျ တငျပွီးဖမျးမှ မိတယျ ဆိုပဲ …။ 😝
အကို အဖမျးခံထိတော့ ညီဖွဈတဲ့ ဗတ်ြတ က ကယျမယျ လိုစိတျမကူးပဲပုဂံကို လဈပွေးတော့တာပဲ …။ဘယျလာကယျရဲမလဲ … သူတို့ က ဘာတနျခိုးသိဒ်ဓိ မှ မရှိဘူးလေ … ဘုနျးဘုနျး ဝိ ကှဲပွီး လြောကျပွောထား လို့သာ လူရှိနျ အောငျ ဖိနျ့ဖိနျ့ လုပျနရေတာ …။😂ဒီတော့ ဗတျြဝိ ကို တော့ ကားစငျတငျပွီး သတျကွတယျပေါ့ ။မသတျခငျ ဘာလုပျခငျြလဲ မေးတော့ ဗတျြဝိက ကှမျးတဈယာ ရတေမုတျ တောငျးတယျ …။
ဒါပမေယျ့ မအိုဇာ လာပို့တာပဲ ဖွဈရမယျ ပွောတော့ မွို့တျောဝနျ က ပထမ တော့ လကျမခံဘူး ငွငျးတယျ ။ အ့နဲ့ ဗတျြဝိ က နောကျဘဝ အဆကျဆကျ သငျ FA ဖွဈပါစေ လို့ ကြိနျစာ တိုကျတော့မှ ကွောကျပွီး လိုကျလြော လိုကျတယျဆိုပဲ …။(အဲကုသိုလျ ကွောငျ့ နောငျတဈခြိနျ မငျးတုနျးမငျး ဆိုပွီး သမိုငျးမှာ ထငျရှားလာတယျပေါ့ …😝)
မအိုဇာလညျး သူ့ခဈြသူကို နောကျဆုံးအနနေဲ့ တှရေ့မယျ ဆိုတော့ ပြျောရမလို ဝမျးနညျးရမလို နဲ့ ဖွဈပွီး fb ပျေါမှာ ဖီးလျ ပိုဈ့တငျရငျး ဈာနျဝငျနတေော့ ကှမျးရှကျ ဝယျဖို့ မသှေ့ားတယျ …။အ့ နဲ့ ခွံထောငျ့က တှတေဲ့ အရှကျခူး ထုံးသုတျပွီးယူသှားလရေဲ့ …။ ဗတျြဝိ ခမြာ မအိုဇာ ပေးတဲ့ ကှမျးကို စားပွီး ဒေါသထှကျ ကှမျးနငျပွီး သပေါရောလား …။မသခေံနိုငျရိုးလား … မောငျတျောမဲ နောကျဆုံးခရီး ဆိုပွီး Live လှငျ့ရငျး ဗတျြဝိ ကို သောကျဖကျမလုပျဘဲ ဖုနျးတဈလုံး နဲ့ မအိုဇာ က အလုပျရှုပျနတောလေ …။ ဟို က တငျးပွီ ထအျောမယျ့ အခြိနျ ကှမျးဖတျ က အသကျရှူ လမျးကွောငျး ပိတျပွီး သတော …။
မအိုဇာ လညျး တှေးတယျ …ကိုဗတျြဝိ ဘာလို့ သသှေားတာလဲပေါ့ …။သူပေးတဲ့ ကှမျးယာ ကွောငျ့လားဆိုပွီး တှေးမိတော့ အ့အရှကျကို ခူးပွီး ဝါးကွညျ့တယျ …။ဘာကွာလိမျ့မတုနျးမအိုဇာ တဈပှတေညျး လှငျ့ ပါလရေော …။အ့မှာ မအိုဇာ အဖွဈမှနျသိပွီး ဗတျြဝိသတော သူ့ ပရောဂ မကငျးဘူးဆိုပွီးစိတျနာနာ နဲ့ … … …အဲ ဝိ အပငျမှနျသမြှ အကုနျခုတျ…. အရှကျလညျး မစားရ …အပငျလညျး မစိုကျရ ဒီလောကျ ဒုက်ခပေးတဲ့ စိတျကွှဆေးပငျ
အိမျထဲမှာ ပေါကျနရေငျတောငျ ဖမျးပေးဖို့ သူ့အဖေ နား ကို မီးပူတိုကျပါလရေော …။သူ့ အဖကေလညျး နားပူသကျသာ အေးရော”လုပျလိုကျကွ ဟ” ဆိုပွီး အပငျမှနျသမြှ ရှငျးတော့တာပဲ …။စားခငျြသူတှေ ကတော့ တိတျတိတျလေးခိုးရောငျး ခိုးဝယျပေါ့ …အဲထဲ က ဝိ က မှောငျခိုခတျေ ဖွဈခဲ့တာ ။မအိုဇာ ရှို့လိုကျတဲ့ မီးက ခုခြိနျထိ တငှငှေ့နေဲ့ ကို လောငျတာ …မှနျပွညျနယျ တဝိုကျ မှာ အ့အရှကျတှကေိုဘိနျးစာရှကျ လို့ ချေါပွီး ကိုလှရှတေို့ ကတှသေ့မြှ ဖမျးနတေော့တာ ခုခြိနျထိပဲ …။
အဲ တရားခံ က မအိုဇာ ပဲ…။နောကျကနျြသေးတယျ …ဗတျြဝိ သတေော့ သူရဲကောငျးမို့မွို့ရဲ့ အစောငျ့ ရအောငျ သူ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျးပွီး မွို့ထောငျ့လေးဘကျမှာ မွှုပျတယျ ဆိုတဲ့ ဂငျြး …။အမှနျက … ဗတျြဝိသတေော့ အခေါငျးသှငျးဖို့ ဘငျြ က ဘတျဂကျြ ခပြေးတယျ ဒါကို ဝနျကွီး နဲ့ မွို့တျောဝနျ က တဈဝကျစီ ဘုနျး ပွီးအျောဒါ မမှာပဲ… ရောငျးတနျး ပေါပေါပဲပဲ ဝယျတယျလေ…။အခေါငျးသှငျး လညျး သှငျးရော မဆံ့တော့ဘူး…။ဗတျြဝိက ထောငျထောငျမောငျးမောငျး ဒူးဆဈက စပွီး အပွငျထှကျနတော …။
အခေါငျးကလညျး ပွနျလဲ လို့မရဘုနျး ထားတဲ့ ပိုကျဆံကလညျး ကုနျဝနျကွီး နဲ့ မွို့တျောဝနျ ကွံရာမရ နဲ့ မထူးပါဘူးကှာ သပွေီးသား မသာ ပဲဟာဒူးကနေ ဖွတျထညျ့လိုကျမယျ အေးရောဆိုပွီး … ဖွတျနတေုနျး …ဘငျြ လာစဈတာနဲ့ တိုးပါလရေော… သိတယျမလား … ဝနျကွီးတှေ အကွောငျးပေါကျကရရှဈဆယျ သိပျပွောတတျတာ …
ခုလညျးကွညျ့ …ပါးစပျထဲ ရှိတာ ရှီရှောငျ လုပျပလိုကျတာမြား”ဗတျြဝိ က အစိမျးသတေော့ မွို့ကို အစောငျ့ရအောငျ လို့အပိုငျးပိုငျးဖွတျပွီး မွုပျမလို့ပါ ဖြား ပေါ့ …”ဘုရငျ ကလညျး ငဒူ ဆိုတော့ …ဂလယျအူကွောငျ နဲ့ ခေါငျးညိတျလိုကျရတာပဲ…။
အဲဒီလိုနဲ့ …ဗတျြဝိ ခမြာ မအိုဇာ နဲ့ ပေါငျးဖို့နနေသောသာသူ့ကိုယျသူတောငျ အကှဲကှဲ အပွဲပွဲ တောငျတပိုငျး မွောကျတပိုငျး နဲ့ဇာတျသိမျးသှား ရရှာတယျ …။
ဗတ်ြတ နဲ့ မယျဝဏ်ဏ
ဗတ်ြတ တို့ အတှဲ RS ခြိတျပွီးငွိ ကွပွီဟေ့ ဆိုကတညျးကပုပ်ပါးတခှငျ ပွဲပွဲစငျအောငျကို ကဲ ကွတာဘယျလောကျထိလဲဆို ပုပ်ပါးမှာ ကလပျ ဖှငျ့ပွီးကဲ တဲ့ အထိပဲ … အဲခြိနျကတညျးကစပွီး ပုပ်ပါးတောငျကလပျ ရယျလို့ နာမညျကွီးတာ ခုခြိနျထိပဲ ဆိုပါတော့ …။ ကဲ ကောငျးကောငျး နဲ့ နှဈယောကျသား ကဲလိုကျကွတာ … နောကျဆုံး ကလေးနှဈယောကျရတော့ မှငွိမျတော့တယျ …
သားလေးနှဈယောကျမှေးတော့ “ရှဖေငျြးကွီး ရှဖေငျြးလေး”လို့နာမညျပေးသတဲ့ …။ပညတျသှားရာ ဓာတျသကျပါတယျဆို မလားပေါ့…။မှေးကတညျး နာမညျ စီး သှားလိုကျတာ နှဈကောငျလုံး ဘယျနရောမှ သုံးစားလိုမရအောငျ ဖငျြးကုနျတော့တာပဲ …။
နောကျဆုံး ~~~နတျဖွဈတဲ့ အထိဖငျြးကွလတေော့သတညျးပေါ့ …။😝
(Crd: အမညျမသိတသိ တျောတျောလှတဲ့ ရှေးစာဆို…😋)
တက ယ်တော့ …
ဗျတ်ဝိ ဗျတ္တ က ဘာ “ဗျတ်” မျိုးနွယ်စု မှ မဟုတ်ဘူး … မဲမဲသဲသဲ နဲ့ ကလွတ်တား ကပ္ပလီ မျိုးနွယ်တွေပေါ့ …။သင်္ဘောပျက်ပြီး သထုံမှာ သောင်လာတင်နေတာ …။ ပြီးတော့ …ညီအ ကို လည်း မဟု တ်လောက်ဘူး …။ကပ္ပလီ တွေ ဆိုတော့ မဲမဲသဲသဲ ထောင်ေ ထာင်မောင်းမောင်း နဲ့ ဘယ်သူ့ကြည့်ကြည့် မန်းကီးရုပ်တွေလေ…။
ဒါကို ညီအကို လို့ ထင်တဲ့ အပေါ်မှာ ဟိုနှစ်ကော င်ကလည်း ရော ကြိတ်တာ ဖြစ်ဖို့များတယ် …။ ဗျတ်ဝိ ဗျတ္တ ညီနောင်ဂလယ်အူကြောင် နဲ့ သထုံမြို့ထဲ လျောက်လှိမ့်ေ နတော့ မနူဟာမင်း ကသိ သွားတယ် …။ ဒါနဲ့ နန်းတွင်းထဲ အလုပ်ခေါ်ခန့်ရင် ကောင်းမလားပေါ့… နိုင်ငံခြားသား အမဲတုံးကို အလုပ်ခေါ်ခိုင်း ပစား ပေးထားရင် ICJ လည်း လွတ် ၊ သူလည်း ဂုဏ်တက်တာ ပေါ့ …။ ဒါပေမယ့် ခက်နေတာက … ဒီနှစ်ကောင် က IS က လူလား ၊ အင်ဂန် က လူလား မကွဲဘူးရယ် …။
နောက်တော့ မထူးပါဘူးကွာ …မကောင်း ကျောင်းပို့ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း သူ့ရဲ့ မင်းဆရာတော် ဘားမဲ့ဆရာတော် ဆီ ပို့လိုက်ပါလေ ရော …ဒါနဲ့ … ဗျတ်ညီနောင် ခမျာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဝေယျာဝစ္ဆ လုပ်ပေါ့ ဆရာတော် ကလည်း ပွဲကျောင်းဆရာတော် ဆိုတော့ … လောကီပညာတွေ သင်ပေးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းဟင်း ကလည်း အလျံပယ် ကျန်တော့ နင်းဖြဲစားလိုက်ကြနဲ့ ဇိမ်ကျနေကြရော …။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်ကြာလာတော့ ဗျတ်ညီနောင်ဟာ သိုင်းပညာကလည်း တတ်လူအကောင်ကလည်း ထွား လာမင်းဆရာတော်ရဲ့ တပည့်တွေ ဆိုပြီး ကလွတ်တား ဇ ဂျိုကြွ ပါလေရော …။တစ်ရက်သား ဆရာတော် အပြင်ထွက်တုန်းကျက်သရေခန်း ထဲ က ကြက်သား ကို ဆေးခြောက် နဲ့ ဗူးသီးရော ပြီး နှစ်ယောက်သား ခိုးချက်စားကြတယ် …။
ချက်နေတုန်း ဘုန်းဘုန်း က မိသွားတော့ သူတို့ ချက်ထားတာ ကို ဦးဦးဖျားဖျား ကပ်လိုက်ရတယ် … အဲဒီမှာ စားကောင်းကောင်း ဘုန်းပေးလိုက်တာကြက်သား ဟင်းလေး (၅) တုံး ပဲ ကျန်တော့တယ် …။အဲမှာ ဟို နှစ်ကောင် အဝေမတည့်ဖြစ်ပြီး ထသတ်ကြပါလေရော ။အကောင်က လည်း ကြီး သိုင်းပညာကလည်း တတ်တော့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲပေါ့ …ဆရာတော့် ကျောင်းက နှစ်တွေကြာလို့ ဆွေးနေတာ … ဒီနှစ်ကောင် အား နဲ့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲတော့ ပြိုပါလေရော …။
အဲမှာ ဘုန်းဘုန်း က ဝိ တွေ ကွဲပြီး ဇော်ဂျီ ဖိုဝင်သားစားလို့ ကျောင်းကို ဇောက်ထိုး လုပ်တယ် ပေါက်ကရ လျှောက်အော်ရော …ဘုန်းဘုန်းပြောသမျှ လည်း ဘယ်သူမှ မငြင်းရဲဘူးလေ … မင်းဆရာဖြစ်တဲ့ အပြင် လက်သံ က ပြောင်တာကိုးးးး …။😅 အဲမှာ ရောင်တော်ပြန် နဲ့ နှစ်ကောင်သား နာမည်ကြီးရောဖဲ …။
နောက် …ဗျတ်ဝိ က လူကသာ မဲ တာ မြို့တော်ဝန် သမီး မအိုဇာ ကို တော်ကီ နဲ့ ချုပ်လိုက်တာ ငြိ ကြရော …။အဲမှာ …ဗျတ်ဝိ က မအိုဇာ ဆီ ညတိုင်း သွားပြီး ဒန် တန့် ဒန် တယ် …။မြို့တော်ဝန် သိသွားတော့ “ဗျတ်ဝိ”ကို ဖမ်းဖို့ကြံရတာပေါ့ … ရမ်းလဲ မလုပ်ရဲဘူး … လူအများကြီး စု ရသေးတယ် … သိတယ်မလား … ဟိုကောင်က တဇောက်ကန်းကြီးရယ် …။
ဒါနဲ့ မအိုဇာဆီ ရောက် နေတုန်း ….ဖမ်းဟ ဆီးဟ နဲ့ ညာသံပေးပြီး ဝိုင်းကြရောဟို ငမဲ ကလည်း လန့်ဖြန့်ပြီး တောင်ရှည် လေးအမြန်ဝတ်ထွက်ပြေးတာ ….ဖြစ်ချင်တော့ တောင်ရှည်မဟုတ်ပဲမအိုဇာ ထမိန် ဖြစ်နေရော … အ့ နဲ့ ရှက်ရှက် နဲ့ ထမိန် ခေါင်းစွပ်ပြီးနင်ဂျာစတိုင် မမြင်မစမ်းလုပ်နေချိန် မြို့တော်ဝန်နဲ့ အဖွဲ့ကဖမ်းမိလိုက်တာပါပဲ …။ဒါကို သမိုင်းဆရာတွေ က ကာယသိဒ္ဓိပြီးလို့ အခန်းတံခါးပေါ် မီးနေသည် ထမိန် တင်ပြီးဖမ်းမှ မိတယ် ဆိုပဲ …။ 😝
အကို အဖမ်းခံထိတော့ ညီဖြစ်တဲ့ ဗျတ္တ က ကယ်မယ် လိုစိတ်မကူးပဲပုဂံကို လစ်ပြေးတော့တာပဲ …။ဘယ်လာကယ်ရဲမလဲ … သူတို့ က ဘာတန်ခိုးသိဒ္ဓိ မှ မရှိဘူးလေ … ဘုန်းဘုန်း ဝိ ကွဲပြီး လျောက်ပြောထား လို့သာ လူရှိန် အောင် ဖိန့်ဖိန့် လုပ်နေရတာ …။😂ဒီတော့ ဗျတ်ဝိ ကို တော့ ကားစင်တင်ပြီး သတ်ကြတယ်ပေါ့ ။မသတ်ခင် ဘာလုပ်ချင်လဲ မေးတော့ ဗျတ်ဝိက ကွမ်းတစ်ယာ ရေတမုတ် တောင်းတယ် …။
ဒါပေမယ့် မအိုဇာ လာပို့တာပဲ ဖြစ်ရမယ် ပြောတော့ မြို့တော်ဝန် က ပထမ တော့ လက်မခံဘူး ငြင်းတယ် ။ အ့နဲ့ ဗျတ်ဝိ က နောက်ဘဝ အဆက်ဆက် သင် FA ဖြစ်ပါစေ လို့ ကျိန်စာ တိုက်တော့မှ ကြောက်ပြီး လိုက်လျော လိုက်တယ်ဆိုပဲ …။(အဲကုသိုလ် ကြောင့် နောင်တစ်ချိန် မင်းတုန်းမင်း ဆိုပြီး သမိုင်းမှာ ထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ …😝)
မအိုဇာလည်း သူ့ချစ်သူကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တွေ့ရမယ် ဆိုတော့ ပျော်ရမလို ဝမ်းနည်းရမလို နဲ့ ဖြစ်ပြီး fb ပေါ်မှာ ဖီးလ် ပိုစ့်တင်ရင်း ဈာန်ဝင်နေတော့ ကွမ်းရွက် ဝယ်ဖို့ မေ့သွားတယ် …။အ့ နဲ့ ခြံထောင့်က တွေ့တဲ့ အရွက်ခူး ထုံးသုတ်ပြီးယူသွားလေရဲ့ …။ ဗျတ်ဝိ ခမျာ မအိုဇာ ပေးတဲ့ ကွမ်းကို စားပြီး ဒေါသထွက် ကွမ်းနင်ပြီး သေပါရောလား …။မသေခံနိုင်ရိုးလား … မောင်တော်မဲ နောက်ဆုံးခရီး ဆိုပြီး Live လွှင့်ရင်း ဗျတ်ဝိ ကို သောက်ဖက်မလုပ်ဘဲ ဖုန်းတစ်လုံး နဲ့ မအိုဇာ က အလုပ်ရှုပ်နေတာလေ …။ ဟို က တင်းပြီ ထအော်မယ့် အချိန် ကွမ်းဖတ် က အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပိတ်ပြီး သေတာ …။
မအိုဇာ လည်း တွေးတယ် …ကိုဗျတ်ဝိ ဘာလို့ သေသွားတာလဲပေါ့ …။သူပေးတဲ့ ကွမ်းယာ ကြောင့်လားဆိုပြီး တွေးမိတော့ အ့အရွက်ကို ခူးပြီး ဝါးကြည့်တယ် …။ဘာကြာလိမ့်မတုန်းမအိုဇာ တစ်ပွေတည်း လွင့် ပါလေရော …။အ့မှာ မအိုဇာ အဖြစ်မှန်သိပြီး ဗျတ်ဝိသေတာ သူ့ ပရောဂ မကင်းဘူးဆိုပြီးစိတ်နာနာ နဲ့ … … …အဲ ဝိ အပင်မှန်သမျှ အကုန်ခုတ်…. အရွက်လည်း မစားရ …အပင်လည်း မစိုက်ရ ဒီလောက် ဒုက္ခပေးတဲ့ စိတ်ကြွဆေးပင်
အိမ်ထဲမှာ ပေါက်နေရင်တောင် ဖမ်းပေးဖို့ သူ့အဖေ နား ကို မီးပူတိုက်ပါလေရော …။သူ့ အဖေကလည်း နားပူသက်သာ အေးရော”လုပ်လိုက်ကြ ဟ” ဆိုပြီး အပင်မှန်သမျှ ရှင်းတော့တာပဲ …။စားချင်သူတွေ ကတော့ တိတ်တိတ်လေးခိုးရောင်း ခိုးဝယ်ပေါ့ …အဲထဲ က ဝိ က မှောင်ခိုခေတ် ဖြစ်ခဲ့တာ ။မအိုဇာ ရှို့လိုက်တဲ့ မီးက ခုချိန်ထိ တငွေ့ငွေ့နဲ့ ကို လောင်တာ …မွန်ပြည်နယ် တဝိုက် မှာ အ့အရွက်တွေကိုဘိန်းစာရွက် လို့ ခေါ်ပြီး ကိုလှရွှေတို့ ကတွေ့သမျှ ဖမ်းနေတော့တာ ခုချိန်ထိပဲ …။
အဲ တရားခံ က မအိုဇာ ပဲ…။နောက်ကျန်သေးတယ် …ဗျတ်ဝိ သေတော့ သူရဲကောင်းမို့မြို့ရဲ့ အစောင့် ရအောင် သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်းပြီး မြို့ထောင့်လေးဘက်မှာ မြှုပ်တယ် ဆိုတဲ့ ဂျင်း …။အမှန်က … ဗျတ်ဝိသေတော့ အခေါင်းသွင်းဖို့ ဘျင် က ဘတ်ဂျက် ချပေးတယ် ဒါကို ဝန်ကြီး နဲ့ မြို့တော်ဝန် က တစ်ဝက်စီ ဘုန်း ပြီးအော်ဒါ မမှာပဲ… ရောင်းတန်း ပေါပေါပဲပဲ ဝယ်တယ်လေ…။အခေါင်းသွင်း လည်း သွင်းရော မဆံ့တော့ဘူး…။ဗျတ်ဝိက ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ဒူးဆစ်က စပြီး အပြင်ထွက်နေတာ …။
အခေါင်းကလည်း ပြန်လဲ လို့မရဘုန်း ထားတဲ့ ပိုက်ဆံကလည်း ကုန်ဝန်ကြီး နဲ့ မြို့တော်ဝန် ကြံရာမရ နဲ့ မထူးပါဘူးကွာ သေပြီးသား မသာ ပဲဟာဒူးကနေ ဖြတ်ထည့်လိုက်မယ် အေးရောဆိုပြီး … ဖြတ်နေတုန်း …ဘျင် လာစစ်တာနဲ့ တိုးပါလေရော… သိတယ်မလား … ဝန်ကြီးတွေ အကြောင်းပေါက်ကရရှစ်ဆယ် သိပ်ပြောတတ်တာ …
ခုလည်းကြည့် …ပါးစပ်ထဲ ရှိတာ ရွှီရှောင် လုပ်ပလိုက်တာများ”ဗျတ်ဝိ က အစိမ်းသေတော့ မြို့ကို အစောင့်ရအောင် လို့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီး မြုပ်မလို့ပါ ဖျား ပေါ့ …”ဘုရင် ကလည်း ငဒူ ဆိုတော့ …ဂလယ်အူကြောင် နဲ့ ခေါင်းညိတ်လိုက်ရတာပဲ…။
အဲဒီလိုနဲ့ …ဗျတ်ဝိ ခမျာ မအိုဇာ နဲ့ ပေါင်းဖို့နေနေသာသာသူ့ကိုယ်သူတောင် အကွဲကွဲ အပြဲပြဲ တောင်တပိုင်း မြောက်တပိုင်း နဲ့ဇာတ်သိမ်းသွား ရရှာတယ် …။
ဗျတ္တ နဲ့ မယ်ဝဏ္ဏ
ဗျတ္တ တို့ အတွဲ RS ချိတ်ပြီးငြိ ကြပြီဟေ့ ဆိုကတည်းကပုပ္ပါးတခွင် ပြဲပြဲစင်အောင်ကို ကဲ ကြတာဘယ်လောက်ထိလဲဆို ပုပ္ပါးမှာ ကလပ် ဖွင့်ပြီးကဲ တဲ့ အထိပဲ … အဲချိန်ကတည်းကစပြီး ပုပ္ပါးတောင်ကလပ် ရယ်လို့ နာမည်ကြီးတာ ခုချိန်ထိပဲ ဆိုပါတော့ …။ ကဲ ကောင်းကောင်း နဲ့ နှစ်ယောက်သား ကဲလိုက်ကြတာ … နောက်ဆုံး ကလေးနှစ်ယောက်ရတော့ မှငြိမ်တော့တယ် …
သားလေးနှစ်ယောက်မွေးတော့ “ရွှေဖျင်းကြီး ရွှေဖျင်းလေး”လို့နာမည်ပေးသတဲ့ …။ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သက်ပါတယ်ဆို မလားပေါ့…။မွေးကတည်း နာမည် စီး သွားလိုက်တာ နှစ်ကောင်လုံး ဘယ်နေရာမှ သုံးစားလိုမရအောင် ဖျင်းကုန်တော့တာပဲ …။
နောက်ဆုံး ~~~နတ်ဖြစ်တဲ့ အထိဖျင်းကြလေတော့သတည်းပေါ့ …။😝
(Crd: အမည်မသိတသိ တော်တော်လှတဲ့ ရှေးစာဆို…😋)
သငျးသငျးက မပွီးပွတျသေးတဲ့အမှုကိစ်စနဲ့ပကျသကျ‌ပွီး သူမကို လြှျောကွေးယူပွီးကွအေေး လိုကျပွီလားဆိုတဲ့ ဝဖေတျမှုတှကေို ဖွရှေငျးလာ………